TOONTA QALALAN: SIDA LOO SAMEEYO XAWAASHKA GURIGA EE QALABKA KORANTADA IYO FOORNADA? - WIXII MARTIDA
Sallaar - khudradda oo si sax ah loogu yeeri karo alaabta guud, taas oo qayb ka ah noocyo kala duwan oo suxuun.
Caadi ahaan, toon cusub ayaa loo isticmaalaa karinta, laakiin marar badan waxaa laga heli karaa qaab la jajabiyey oo la qalajiyey.
Garlic, oo aad u qalajiyey aad u haboon in lagu kaydiyo waxaana la heli karaa sanadka oo dhan.
Haddii goosashadaada toonta ay noqoto mid taajir ah, waxaadna haysataa dalagyo badan oo ku filan oo laguugu keydiyo miiska ama qaybta, iyo xitaa xiran karo kaydadka iyo xirmooyinka lagu keydiyo kaydka xilliga qaboobaha ee guriga, markaa waxbaa lagaa tagay inaad samayso si aad u qallajisid ama u qaboojisid haraadiga ma tagin.
In ay ka kooban, toon qallalan waa isku mid ah khudradda cusub. Waxaa jira qadar badan oo toon ah. ee fitamiinada iyo ugu faa'iido badan walxaha macdanta. Sidaa darteed, toonta qallalan waa mid hodan ku ah:
fitamiinada kooxda B, C, E, PP;
macro-iyo mareeynyo: potassium, magnesium, zinc, selenium, copper iyo manganese, birta, kobaltada, fosfooraska, sodium.
Toonta la qalajiyey waa ilo dabiici ah. phytoncideskuwaas oo ku lug leh dagaalka ka dhanka ah dhammaan noocyada la yaqaan ee maadooyinka pathogenic ee maanta.
Isticmaalka joogtada ah ee toon / qalaji cusub ayaa saameyn ku leh caafimaadka.
Toonta la qalajiyey - guryaha faa'iido leh:
waxay ka caawisaa daaweynta kala duwan viral cudurada;
roon bakteeriyada saameynta jidhka;
ku lug leh hoos u dhigidda heerarka dhiigga kolestaroolka;
waxay ka hortagtaa horumarinta cudurrada qalabka wadnaha nidaamyada;
waxay yaraynaysaa khatarta garaaca wadnaha iyo wadnaha;
burburinayaan helminthic gardarada;
waxay caawisaa daaweynta ujeeda cudurada;
loo isticmaalo sidii loogu talagalay daaweynta cudurrada beerka;
digniin itaaldarro ragga.
Iyada oo dhammaan mudnaanta ee wax soo saarka, toonta qalalan ka horjeeda si loogu isticmaalo dadka ay hayso xanuunada foosha ee xubnaha unugyada dheef-shiidka, iyo sidoo kale midab-takoorka shakhsi ahaaneed.
Sidee loo qalajiyaa toonta guriga?
Haddii aad go'aansato in la qalajiyo dalagga this xidid, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto toon ah noocyo qadhaadh gaar ah - Silver, Creole.
Xaqiiqdu waxay tahay in noocyo kale, ka dib markii gudbinta habka qalajinta, awoodaan lumiso dhadhankaaga, iyo noocyo gaar ah oo toon ah waxay ku hadhi doonaan sida karis iyo dhadhan fiican leh.
Sidaas, ka hor inta, sida loo bilaabi toonta qalajinta, waa in loo diyaar garoobo. Sidaa darted, madaxyada khudradda waa in loo qaybiyaa ilkaha iyo diirran.
Muhiim: Waxaa jira fikrad ah in ay tahay in la nadiifiyo. biyo raaci biyo. Si kastaba ha noqotee, ra'yigaani waa khalad, tan ka dib markii uu fuliyo nidaamka noocan oo kale ah way adagtahay in la qalajiyo badeecadda, nolosheeda shelf ayaa hoos u dhacda.
Casiir qajaar ayaa leh mid aad u saameyn xun on maqaarka aadanaha. Sidaa daraadeed, ka dib marka ilkaha la nadiifiyo, waxaa lagu talinayaa in lagu xidho gacmo gashi gacmahaaga. Qalabka hawo qalajinta, ilkaha diyaarka ah ayaa loo jarjarey 2 gogo '.
Haddii lagu qalajiyo foorno ama qalajiye koronto ayaa la bixiyaa, ka dibna ilkaha ayaa la jarayaa mindi fiiqan. Dhamaan khaanadaha "dhirta" (si aad u dardargeliso, waxaad isticmaali kartaa walaaca).
Mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee loo diyaariyo toonta qalajinta waa jarista qolka si fiican u hawo, sida walxaha ku jira toonta, aad u dhakhsaha badan waxay bilaabi doontaa inay ka xanaajiso xuubka xabka ee sanka iyo cunaha.
Sida shey kasta oo kale, toon ayaa la qalajin karaa hab dabiiciga ah iyo macmal.
Sidee loo sameeyaa toonta qoyan guriga? Si aad u qallajiso qorraxda furan, ku dar jarjar gogol la jarjaray, ka hor inta aadan u isticmaalin warqad xajin, foorno ama dhar nadiif ah oo adag.
Waa lagama maarmaan in la gooyo jarida habkaas oo kale furaha jilicsan (meesha la gooyey) ayaa kor u kacay.
Tani waxaa loo sameeyaa si loo toon casiirku ma daayo marka qalajinta oo aan ku qoynin maaddada oo ay daboolka ka qarisay. Nidaamka qallajinta dabiicigu wuxuu soconayaa 5-7 maalmood.
Sidee loo tolaa toonta guriga ee foornada? Gacmo qoyan oo la jarjarey ayaa ku faafay hal lakab saarista saxda ah dubista, horay loo dhigey warqad dubista ama foorno. Ku rid digsiga foornada, kuleyliyaan ilaa 55-60 ° S.
Qalitaanka waxaa lagu sameeyaa foornada foornada 30-40 daqiiqo. Wakhti ahaan, "tufaaxa" ee toonta waa in la isku daraa si aan loo gubin. Waqtiga kadib, toonta waxaa laga saarayaa foornada oo lagu qaboojiyaa heerkulka qolka.
Sidee loo qallajiyaa toonta dheelitaanka qallajiye? Natiijooyin fiican waxaa lagu helayaa adigoo qallajinaya toonta qalabka korantada - dhaqso iyo iyada oo aan dhibaato lahayn.
Waxyaabaha la diyaariyey ayaa lagu qeexay saqafka, qalajiyaha korontada waxaa ka mid ah markaad buuxdo.
Iyo horeyba 6-7 saacadood udgoon diyaar
Sidee loo qallajiyaa toonta korantada? Talooyin ku saabsan qallajinta toonta guriga ee qalabka korantada ee fiidiyowga:
Haddii aad xiiseyneyso sida loo qalajiyo dabacasaha, basbaaska macaan ama kalluunka basbaaska ah guriga, akhri qoraalladaan ku saabsan arrintan.
Sidee loo go'aamiyaa diyaargarowga? Sucuudiga la qalajiyey qallajin iyo jajabyo gacanta.
Sidee iyo meesha lagu keydiyo toonta guriga? Toonta qallalan ee lagu hayo weel xiran oo xiran. dhalada weelasha qaboojiyaha. Nolosha Khadka - 3-5 bilood.
Si badeecada loo soo saaro ma horey u sii wiiqmeynin waqti ka hor, ka saar weelka weelka nadiifka ah, qallalan.
Toonta la qalajiyey sidoo kale waa la keydin karaa. ee foomka budada, ee loogu talagalay diyaarinta nooca qalalan ee loo baahan yahay in lagu burburiyo blender, ee Booqdaha kafeega ama isticmaalaya hoobiye gacanta caadiga ah. Kalluunka qajaanka waxaa sidoo kale lagu keydiyaa qaboojiyaha.
Garlic waa istaahilaa in lagu magacaabo bogsiiye dabiiciga ah. Isku daridda helitaanka khudradda iyo hantidooda faa'iido leh waxay sameeyaan toon aad u caan ah alaabta. Waa in lagu daraa toon cusub oo la qallajiyey cunto maalinle ah qof walba, oo keenaya guriga caraf udgoon ee caafimaadka iyo maareynta.